သူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို စွန့်၍ပြးကြ၏။ | Real Conversion
သူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို စွန့်၍ပြးကြ၏။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၁၇ ရက်၊ လောအိန်ဂျယ်လိတ်မြို့တဲ့တော် နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့ ညနေပိုင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်
“ထိုအကြောင်းအရာမူကား၊ အနာဂတ္တိကျမ်း ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်းဟု လူအစုအဝေးကို မိန့်တော် မူ၏။ ထိုအခါ တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကို စွန့်ပစ်၍ပြေးကြ၏။ (ရှင်မဿဲ ၂၆း၅၆)
ယေရှုသည် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်၌တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်ဆန်စွာ ဆုတောင်းခြင်းကို အဆုံးတိုင်ခဲ့ပြီ။”ထကြ၊ ငါတို့သည် သွားကြကုန်အံ့။ ငါ့ကိုအပ်နှံသောသူသည် ရောက်ပြီ” ဟု (ရှင်မဿဲ ၂၆း၄၆) ၌ အိပ်ပျော်နေကြသော တပည့်တော်တို့အား နှိုးတော်မူ၏။ တပည့်တော်တို့သည် အိပ်ရာမှ နိုးကြစဉ်တွင် “ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် လူတို့တွင် အကြီးအကဲဖြစ်သောသူများ စေလွှတ်သော လူအစုအဝေး အပေါင်းတို့သည် ဓါးနှင့်ဒုတ်များကို ကိုင်လျှက် ယုဒရှာကာယုတ်ဦးဆောင်ကာ ရောက်လာကြ၏။ (ရှင်မဿဲ ၂၆း၄၇)။ ဂေသရှေမန်၏ အမှောင်ဆုံးညတွင် တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည် အံ့ဩဖွယ်ရာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အတူအညီအကြည့်ချင်းဆုံခဲ့ကြသည်။ “ငါနမ်းသောသူသည် ယေရှုပင်ဖြစ်၏။ သူ့ကိုဖမ်းကြဟု “ဗိမာန်တော်အစောင့်တပ်” တို့အား ယုဒရှာကာယုတ်သည် အမှတ်ပေးပြောကြားခဲ့သည်။ (ရှင်မဿဲ ၂၆း၄၈)။ ယုဒရှာကာယုတ်က ယေရှု၊သင်သည် မင်္ဂလာရှိပါစေဟုဆိုလျှက် နမ်းပြီး “ထိုသူများတို့သည် လာ၍ကိုယ်တော် ဆွဲကိုင် ဖမ်းဆီးကြ၏” (ရှင်မဿဲ ၂၆း၅၀)။ “ထိုအခါ ရှိမုန်ပေတရုသည် မိမိ၌ပါသော ဓါးကိုဆွဲထုတ်ပြီးလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏ ကျွန်တစ်ယောက်ကိုခုတ်သဖြင့် လက်ျmနားရွက် ပြတ်လေ၏။ ထိုကျွန်၏အမည်ကား မာလခုဖြစ်သညတ်း။ (ရှင်ယောဟန် ၁၈း၁၀)။ ယေရှုကလည်း တန်စေဟု မိန့်တော်မူ၍ “နားရွက်ကို လက်တော်နှင့်တို့သဖြင့် အနာကိုပျောက်စေတော်မူ၏ (ရှင်လုကာ ၂၂း၅၁)။ “ယခုပင် ငါ့အဘကို တောင်းနိုင်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ တောင်းလျှင် ကောင်းကင်တမန် တစ်ဆယ့်နှစ်တပ်မက ငါ့ထံသို့ စေလွှတ်တော်မူမည်ကိုလည်းကောင်း သင်မစဉ်းစားသလော? သို့ဖြစ်လျှင် ဤသို့သော အမူအရာတို့သည် ဖြစ်ရမည်ဟူသော ကျမ်းစာချက်သည် အဘယ်သို့ပြည့်စုံအံ့နည်း? ဟု ယေရှုသည် ပေတရုအား ဓါးကို သူ့နေရာ၌ ပြန်ထားရန် ပြောကြားခဲ့သည်။ “သင်တို့သည် ဓားပြကိုဖမ်းသကဲ့သို့ ငါ့ကိုဖမ်းအံ့သောငှာ ဓားနှင့်ဒုတ်များကို စွဲလျက် လာကြသည်တကားÂ။ ငါသည် ဗိမာန်တော်၌ နေ့တိုင်းဆုံးမဩဝါဒပေးလျှက် သင်တို့အလယ်၌ ထိုင်နေစဉ်အခါ သင်တို့သည် ငါ့ကို မဖမ်းဆီးကြဟု ယေရှုသည် သူ့ကို ဖမ်းဆီးရန် လာကြသောသူတို့အား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်၍ ပြောကြားခဲ့၏။ (ရှင်မဿဲ ၂၆း၅၅)။
ကျွန်ုပ်တို့၏ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ လာသည်ကား -
“ထိုအကြောင်းအရာမူကား၊ အနာဂတ္တိကျမ်းပြည့်စုံမည့် အကြောင်းတည်း ဟု လူအစုအဝေးတို့ကို မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကို စွန့်ပ်စ၍ ပြေးကြ၏။ (မဿဲ ၂၆း၅၆)။
ပရောဖက်များသည် ဤအဖြစ်အပျက်များနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်ပေါင်းရာချီ အစောပိုင်းကပင် ဖြစ်ပျက်မည့် အခြင်းအရာကို ဖော်ပြပြီး ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ အာရ်.စီ.အိပ်ခ်ျလန်းစကီးက “ဤအခြင်းအရာတစ်ခုလုံးသည် အကြောင်းအရာတစ်ခုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတည်း၌သာ ဖြစ်ပျက် မည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာလာ ဖရောဖက်များ၏ နုတ်တော်ထွက်စကားပြည့်စုံခြင်း” ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ အနာဂတ်၌ ဖြစ်လာမည့် ပရောဖက်တို့၏ ကြိုတင်ဟောကြားခြင်းနှင့်ဆိုင်သော အစီစဉ်ကို ဤညဉ့်၌ပင် ပြည့်စုံစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းပိုဒ်ငယ် ၅၆း ပြည့်စုံစေခြင်းအလို့ငှာ ယေရှုသည် ရက်ရောစွာ မိမိကိုယ်ကို ဖမ်းဆီးသူတို့၏လက်သို့ အပ်နှံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ကို ဆောင်သွားသောအခါ “တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုစွန့်၍ ပြေးကြ၏” (အာရ်.စီ.အိပ်ခ်ျလန်းစကီး ဖီအိပ်ခ်ျဒီ The Interpretation of St. Mathew's Gospel, သူတော်စင်ရှင်မဿဲစာအုပ် အနက်ဖွင့်ခြင်း၊ အောက်စဘတ်ပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၆၄ ထုတ်ဝေခြင်းစာ ၁၀၅၅၊ ရှင်မဿဲ ၂၆း၅၆ မှတ်စုအရ)။
“ထိုအကြောင်းအရာမူကား အနဂတ္တိကျမ်းပြည့်စုံမည် အကြောင်းတည်းဟု လူအစုအဝေးတို့ကို မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုစွန့်ပစ်၍ ပြေးကြ၏။ (ရှင်မဿဲ ၂၆း၅၆)
ဤသည် ကျွန်ုပ်၏ ဒေသနာတော်ဟောကြားခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ “ကိုယ်တော်ကို စွန့်ပစ်၍ပြေးကြခြင်း” သည် ၎င်းကျမ်းပိုဒ်ကို နက်နက်နဲနဲတွေးတောပြီး ဖော်ထုတ်သောအခါ တပည့်တော်များ စွန့်ပစ်၍ပြေးကြခြင်း၏ အကြောင်းအရာအချို့ ရှိပေသည်။ ဒေါက်တာဂျော့ခ်ျရိက်ကာဘေရီက ဂရိတ်စကား "Forsook" ကို KJV ကျမ်း၌ "abandon" စွန့်ပစ်ခြင်းဟု အနက်ဖွင့်ခဲ့သည်။ (A Grek-English Lexicon and New Testament Synonyms) ကို ဂရိ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်နှင့် ဓမ္မသစ်အနက်ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ ဤနေရာ တွင် တပည့်တော်များက “ယေရှုအား စွန့်၍ ပြေးကြခြင်း” ၏ အကြောင်းအရာများစွာ ရှိပါသည်။
။၁	ပထမကိုယ်တော်အား စွန့်ပစ်၍ ပြေးကြခြင်းသည် ပရောဖက်များ ကြိုတင်ဟောကြားသော ကျမ်းစာပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။
နုတ်ကပတ်တော်၌လာသည်ကား၊ တပည့်တော်များ၊ ကိုယ်တော်အား စွန့်ပစ်၍ ပြေးကြခြင်းအပါအဝင်၊ “အားလုံးသော နုတ်ကပတ်တော် ၌ ပရောဖက်များ ကြိုတင်ဟောပြောသမျှ ပြည့်စုံခြင်း” ဖြစ်သည်။
“သူတစ်ပါးကလည်း သင့်လက်၌ပေါ်သောဒဏ်ရာကား အဘယ်သို့နည်း? ဟု မေးလျှင် ဤဒဏ်ရာကား ကျွန်ုပ်၏အဆွေခင်ပွန်းအိမ်၌ ခံရသောဒဏ်ရာဖြစ်ပါသည်ဟု ပြန်ပြောလိမ့်မည်။ သိုးထိန်းကို ရိုက်သတ်လော။ သို့ပြုလျှင် သိုးတို့သည် ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်” (ဇာဂရိ ၁၃း၆-၇)
“သိုးထိန်းကို ရိုက်သတ်လော့။ သို့ပြုလျှင် သိုးတို့သည် ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်” ဟူသော ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီ ဒေါက်တာ ဟန်နုရီ.အမ်.မော့ရစ် ပြောကြားသည်မှာ-
၎င်းကျမ်းပိုဒ်ကို ရှင်မဿဲ ၂၆း၃၁ နှင့် ရှင်မာကု ၁၄း၂၇ ၌ ကိုးကားထားသည်။ (သူ) ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် ကောင်းသောသိုးထိန်းဖြစ်၏။ ကောင်းသောသိုးထိန်းသည် သိုးတို့အဖို့အလို့ငှာ မိမိအသက်ကို စွန့်တတ်၏။ (ရှင်ယောဟန် ၁ဝး၁၁) သို့ပါသော်လည်း ခေတ္တခဏ သိုးများကွဲလွင့်ခြင်း သည် ယောက်ယတ်ခတ်၍ မနှစ်မြို့စရာကမ္ဘာ ပြောင်းလဲခြင်း၏ ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်၏။ (ဟန်နရီ.အမ်. မောရစ်ဖီအိပ်ခ်ျဒီ၊ The Defender's Study Bible ၊ ကမ္ဘာ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး၊ ၁၉၉၅ ထုတ်ဝေခြင်း၊ စာမျက်နှာ ၉၉၃၊ ဇာခရိ ၁၃း၇ မှတ်စုအရ)။
ခရစ်တော်ယေရှုကိုယ်တိုင် ရှင်မဿဲ ၂၆း၃၁ ၌ ဖော်ပြသည့်အတိုင်း သူ့တပည့်တော်များက သူ့အားစွန့်ပစ်၍ ပြေးကြလိမ့်မည်ဟု ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်း ၁၃း၇ ၌ ကြိုတင်ဟောကြားခဲ့သည်မှာ-
“ထိုအခါ ယေရှုကလည်း ကျမ်းစာလာသည်ကား သိုးထိန်းကို ငါရိုက်သတ်၍ သိုးတို့သည် ကွဲလွင့်ရကြ လိမ့်မည်ဟု ရေးသားသည်နှင့်အညီ ယနေ့ညဉ့်တွင် သင်တို့ရှိသမျှသည် ငါ့ကြောင့် စိတ်ပျက်ကြ လိမ့်မည် (ရှင်မဿဲ ၂၆း၃၁)
ထပ်မံ၍ ရှာမာကု ၁၄း၂၇ ၌ ဖော်ပြထားသည်မှာ -
“ထိုအခါ ယေရှုကလည်း ကျမ်းစာလာသည်ကား သိုးထိန်းကို ငါရိုက်သတ်၍ သိုးတို့သည် ကွဲလွင့် ရကြလိမ့်မည်ဟု ရေးထားသည်နှင့်အညီ ယနေ့ညဉ့်တွင် သင်တို့ရှိသမျှသည် ငါ့ကြောင့် စိတ်ပျက်ကြ လိမ့်မည်” (ရှင်မာကု ၁၄း၂၇)
ကိုယ်တော်အား တပည့်တော်များ စွန့်ပစ်၍ ထွက်ပြေးကြရခြင်းသည် ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်းစာလာ ကြိုတင်ဟောကြားချက်များ ပြည့်စုံခြင်းသာ ဖြစ်သောကြောင့် စောဒကတက်စရာအကြောင်း မရှိပေ။
“ထိုအကြောင်းအရာမူကား၊ အနာဂတ္တိကျမ်းပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်းဟု လူအစုအဝေးတို့ကို မိန့်တော် မူ၏။ ထိုအခါ တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကို စွန့်ပစ်၍ပြေးကြ၏။” (ရှင်မဿဲ ၂၆း၅၆)
၂။	ဒုတိယ၊ ကိုယ်တော်အား စွန့်ပစ်၍ ပြေးကြခြင်းသည် အပြစ်၌ပြိုလဲသော မျိုးနွယ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လူသားမျိုးနွယ်သည် အပြစ်၌လဲကျသော အမျိုးဖြစ်ကြကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ မမေ့လျော့သင့်ပေ။
“ဤအကြောင်းအရာဟူမူကား အပြစ်တရားသည် တစ်ယောက်သောသူအားဖြင့် ဤလောက သို့ဝင်၍ အပြစ်တရားအားဖြင့် သေခြင်းတရားဝင်သည်နှင့်အညီ လူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိသောကြောင့် သေခြင်ငးသို့ ရောက်ရကြ၏။” (ရောမဩဝါဒတ ၅း၁၂)
ထို့အတွက်ကြောင့် လူသားထုတစ်ခုလုံးသည် “အပြစ်၌သေလျှက်” မွေးဖွားလာကြသည်။ (ဧဖက်ဩဝါဒဘ ၂း၅) ထိုအတွက်ကြောင့် လူသားထု တစ်စုလုံးသည် “အမျက်တော်ခံရသောသူ” ဖြစ်ကြ၏ (ဧဖက်ဩဝါဒစာ ၂း၃)
တပည့်တော်တို့သည်လည်း ပုထုဇဉ်လူသားများဖြစ်ကြ၍ အခြားသော လူထက်သာလွန်သူ မဟုတ်ကြပေ။ ထိုသူတို့သည်လည်း “အမျက်တော်ကို ခံရသူများဖြစ်ကြပြီး “အပြစ်၌သေကြသူ” များဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူတို့သည်လည်း အာဒံမှဆင်းသက်သော အပြစ်သားများဖြစ်ကြ ၏။ An Old New England Children's Book ၌ ရေးသားထားသကဲ့သို့
ထို့အပြင် တပည့်တော်များ၏ ဇာတိပကတိစိတ်သဘောသည် “ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်” သည်။ (ရောမ ၈း၇) ထို့အတွက်နှင့် တပည့်တော်တို့သည် ခရစ်တော်ဟောပြောသော သတင်းကောင်းကို ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ ဂျေ၊ ဗန်နုန် မက္ကီး ပြောကြားသည်မှာ-
“ခရစ်တော်သည် ယေရှုဆလင်မြို့သို့သွားရောက်ပြီး အသေခံမည်ကို ငါးကြိမ်တိုင်တိုင် ထပ်ခါတလဲလဲ ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ (ရှင်မဿဲ «၁၆း၂၁» ၁၇း၁၂၊ ၁၇း၂၂-၂၃၊ ၂ဝး၁၈-၁၉၊ ၂ဝး၂၈)။ ဤကဲ့သို့ ပြင်းထန်သေချာစွာ သွန်သင်ပါသော်လည်း တပည့်တော်တို့သည် သတင်းကောင်းဟောကြားရေး အရေးပါမူကို ယေရှုသေခြင်းမှ ထမြောက်ပြီး တိုင်မြဲမြံစွာ ဆုပ်ကိုင်ရန် လက်လွတ်ခဲ့ကြသည်။ (ဂျေဗန်နုန်မက္ကီးတီအိပ်ခ်ျ.ဒီ Thမက Thန ငြဘူန ၊ သောမက်စ်နဲလ်ဆန် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူ - ၁၉၈၃- အတွဲ-၆၊ စာ ၉၃၊ ရှင်မဿဲ ၁၆း၂၁ မှတ်စုအရ)
ဘာကြောင့် တပည့်တော်တို့သည် သတင်းကောင်းကို မြဲမြံစွာ ဆုပ်ကိုင်မထားခဲ့ကြသနည်း? အဖြေမှာရိုးစင်းလှပါသည်-
“ငါတို့ဟောပြောသော ဧဝံဂေလိတရားသည် ဖုံးအုပ်လျှက်ရှိလျှင်၊ ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သော သူတို့အား သာ ဖုံးအုပ်လျှက်ရှိ၏ (၂ ကော ၄း၃) ဟု ဖော်ပြသည်။
ရှင်ယောဟန် ၂ဝး၂၂ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒေါက်တာမက္ကီး၏ မှတ်ချက်ပေးပြောကြားသည်မှာ တပည့်တော်တို့သည် ခရစ်တော်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်းနှင့် “ထိုသူတို့အပေါ်မှာ မှုတ်လျှက်၊ သင်တို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ခံကြလော့” ဟု မိန့်တော်မူသော အထိအတွေ့မရှိခင်အထိ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း (အသစ်မွေးဖွားခြင်း) မခံရကြသူများဖြစ်သည်။ (ဂျေ.ဗန်နုန်မက္ကီး တီအိပ်ခ်ျဒီ ibid စာ ၄၉၈၊ ရှင်ယောဟန် ၂ဝး၂၂ မှတ်စုအရ)။ ကျွန်ုပ်၏ တရားဒေသနာတော်ကို ဖတ်လိုပါက အောက်ပါခေါင်းစဉ်များကို နှိပ်ပြီး ဝင်ဖတ်ပါ။ "The Fear of the Disciples" တပည့်တော်များ၏ ကြောက်ရွံ့ခြင်း! "This saying was Hid from them" ဟောကြားသည့် ဧဝံဂေလိတရားသည် သူတို့ဖုံးအုပ်လျက်ရှိသောကြောင့် "The Conversion of Peter" ၊ ရှင်ပေတရု၏ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း၊ "Peter Under Conviction" ရှင်ပေတရု အပြစ်တရားကို သိနားလည်ခြင်းနှင့် ဝန်ခံခြင်းနှင့် "The False Repentance of Judas" ၊ ယုဒရှာကယုတ် ၏ မှားယွင်းသော နောင်တတရားတို့ကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
“ထိုအခါ တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကို စွန့်ပစ်၍ ပြေးကြ၏” (ရှင်မဿဲ ၂၆း၅၆)
အချို့သော သူတို့က မိတ်ဆွေအား တပည့်တော်များသည် ခရစ်တော်ဘုရား၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး အသစ်ပြုပြင်သော သတ္တဝါနှင့် ပြောင်းလဲ သော အသက်တာမရရှိကြသေးဘူးဟု ပြောခြင်းသည် မဖြစ်နိုင်ဘူးဟု ပြောကောင်းပြောပေမည်။ ထိုအတွေးသည် မိတ်ဆွေ၏ ထင်ကြေးသာဆိုပါ လျှင် ဆုတောင်းရင်းနှင့် အလင်းတည်းဟူသော သမ္မာကျမ်းစာကို ဆွေးနွေးကြပါဦးစို့လား။
ကျွန်တော်သည် သိက္ခာတော်ရ ဆရာတော် အိုင်ဘိန်းအိပ်ခ်ျမာရေး၏ The Old Evangelicalism (နဂိုမူရင်းဧဝံဂေလိ) (The Banner of Truth Trust 2005) ကို လေးစားနှစ်သက်ပါသည်။ အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အိုင်အိန်းအိပ်ခ်ျမာရေး ယေဘုယျပြောကြားသည်မှာ “ယခုအချိန်သည် အသက်တာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်မှန်သော သမ္မာတရား၌ အသက်တာပြောင်း လဲခြင်း အသိပြန်လည်ဖို့လိုနေပါပြီ။ ဤသင်ခန်းစာထဲက အငြင်းပွားဖွယ် အသေးအမွှေားများ ထောင်ချီနေပါသော်လည်း ကျမ်းနာသန်စွမ်းတဲ့ မုန်တိုင်းက တိုက်ထုတ်သွားပါလိမ့်မည်။ (စာ ၆၈)။ ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ထံ စာရေးသားဆက်သွယ်ပါ။ မိတ်ဆွေများတို့၏ အထင်အမြင် အယူအဆကို ကြားသိလိုပါ၏။ တစ်ဦးချင်းစီကို ကိုယ်တိုင်ဖြေကြားပေးပါမည်။
“ထိုအခါ တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုစွန့်ပစ်၍ ပြေးကြ၏။” (ရှင်မဿဲ ၂၆း၅၆)။
၃။	တတိယယေရှုဘုရားအား စွန့်ပစ်၍ ပြေးကြခြင်းသည် ဤအရာကို ဦးစားပေး၍ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း (နဂိုမူလဧဝံဂေလိ)ကို မသိနားလည်သောကြောင့်ဖြစ်၏။
တပည့်တော်များသည် မိမိတို့၏ စွမ်းရည်သတ္တိကိုသာ ယုံကြည်အားကိုးသူများကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သိကြသည့်အတိုင်း ယေရှုဘုရား ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး နောက်ထပ်ခါတလဲလဲ တပည့်တော်တို့ ရှေ့မှောက်တွင် ပေါ်လာမြဲဖြစ်၏။ သက်သေသာဓကအားဖြင့် ယေရူဘုရားသည် ပေတရုအား သင်သည် ထိုည၌ပင် ထိုသူကို ငါမသိဟု ငြင်းပယ်လိမ့်မည်ကို မိန့်တော်မူ၏။
“ပေတရုကိုယ်တော်နှင့်တကွ သေရသော်လည်း အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ကို မငြင်းပယ်ပါဟု လျှောက်ပြန်၏။ တပည့်တော် အပေါင်းတို့သည်လည်း ထိုနည်းတူ လျှောက်ကြ၏။” (ရှင်မဿဲ ၂၆း၃၅)
ဒေါက်တာအယ်လွိုင်း - ဂျုံးပြောကြားသည်မှာ -
အပြစ်တရားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခံယူချက်မရှိပါက စစ်မှန်သော ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဟူ၍ မရှိပါ။ ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းဟူသည် ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းမှ အစပြုသောကြောင့် အပြစ်သားဖြစ်ခြင်းနှင့် အပြစ်၏ အခဖြစ်သော ထာ၀ရသေခြင်း အကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း ရှိရပါမည်။ မိမိတို့၏ အပြစ်ဆိုးကျိုးကို သိနားလည်ပြီး အပြစ်မှ ရွေးနုတ်ဖို့ရန် မိတ်ဆွေသည် မိမိတို့၏ အပြစ်ကို ယေရှုဆီ ယူဆောင်လာရပါမည်။ (ဒီ.မာ. တန် အယ်လွိုင်း-ဂျုံး အမ်ဒီ Studies in the Sermon on the Mount (တောင်ပေါ်ဒေသနာမြတ်ကို လေ့လာခြင်း) အင်တာဗားဆီတီ၊ ၁၉၅၉ အတွဲ ၁၊ စာ ၂၃၅)။
တပည့်တော်များသည် “ကိုယ်တော်ကို စွန့်ပစ်၍ ပြေးကြ” ပြီးနောက်ထိတိုင် စစ်မှန်သော ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဆိုင်ရာ (မူလဧဝံဂေလိ) အပြစ်တရားအကြောင်း သိနားလည်မှု မရရှိကြသေးဟု ကျွန်ုပ်ထင်မိပါသည်။ “ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးက ကြွလာတော်မူကြောင်း” ကို ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြပါသည်ဟု တပည့်တော်များ မကြာသေးခင် အစောပိုင်းက ပြောခဲ့ကြသေးသည်။
“ယေရှုကလည်း ယခုတွင် ယုံကြပြီလော့။ သင်တို့သည် ကွဲပြား၍ ငါ့ကိုတစ်ကိုယ်တည်းနေစေခြင်းငှာ စွန့်ပစ်လျှက် အသီးသီးမိမိတို့နေရာသို့ ပြေးသွားမည့် အချိန်ကာလသည် လာ၍ ယခုပင် ရောက်ပေ၏” (ရှင်ယောဟန် ၁၆း၃၀-၃၂)
ဓရြွှင်ပေတရုသည် ခရစ်တော်ဘုရားအား ခါးသီးစွာ ငြင်းဆန်ပြီးနောက် သူ၏ အပြစ်သိနားလည်ခံစားမှုသည် အခြားသော တပည့်တော်များ ကိုပင် ခံစားစေသည်ဟု ကျွန်ုပ် ယုံကြည်ပါသည်။ “ပြင်သို့ထွက်၍ ပြင်းစွာငိုကြွေးလေ၏။ (ရှင်လုကာ ၂၂း၆၂) ၌ ဖော်ပြပါသည်။ (ဒေါက်တာ ဒဗဗျူ.ဂျီ.တီ ရှတ် အနက်ဖွင့် ရှင်းလင်းမှာသည် “မိမိသည် အပြစ်သားဖြစ်ခြင်းနှင့် အပြစ်ဝန်ခံခြင်း မပြုမချင်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ထုံးစံအားဖြင့် အသစ်ပြုပြင်မပေးပါ။ (Shedd Dogmatic Theology တထစ်ချယုံကြည် လက်ခံခြင်းနှင့် ဘုရားကို လေ့လာခြင်းဗေဒ အတွဲ ၂ စာမျက်နှာ ၅၁၄)။
အခုဆို နိဂုံးချုပ်တော့မှာမို့ အသစ်ပြုပြင် မပြောင်းလဲသေးသူများအဖို့ ထိရောက်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိစေလိုသဖြင့် ဒေသနာတော်အစသို့ ပြန်၍သွားလိုပါသည်။ မိတ်ဆွေ၏ စိတ်နှလုံးသည် ခပ်သိမ်းသောအရာထက် စဉ်းလဲပြီး အလွန်ယိုယွင်းပျက်စီးသော သဘောရှိ၍ မိတ်ဆွေသည်၊ “ပျက်စီးသူနှင့် အပြစ်သားဖြစ်သည်ကို မိတ်ဆွေ ခံစားခဲ့ပါသလား? (ယေရမိအနာဂတ္တိ ၁၇း၉) မိတ်ဆွေသည် ငြိုငြင်သောသူ ဖြစ်၍ ဤအသေကောင်မှ ငါ့ကို အဘယ်သူ ကယ်လွှတ်မည်နည်း ဟု ခံစားခဲ့ဖူးပါသလား? (ရောမ ၇း၁၄)။ မိတ်ဆွေသည် မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိ အားကိုးယုံကြည်နေခြင်းကို ဖျောက်ဖျက်ပြီလား? ဒေါက်တာအယ်လွိုင်း-ဂျုံး ပြောကြားသည်မှာ “အပြစ်မှ ရွေးနုတ်ခြင်းကျေးဇူးကို ရရှိခံစားနိုင်ဖို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ မိမိတို့၏အပြစ်အားလုံးကို ခရစ်တော်ဘုရားရှေ့တော်၌ ဆောင်ယူပြီး ဝန်ချတောင်းပန်ဖို့ပင် ဖြစ်သည်။” (ibid)/
ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျက် သီချင်းနံပါတ် (၈) ကို သီဆိုကြပါစို့-
ယေရှုနာမတော် ချီးမြောက်ကျူးဧကြ၊ ပြီးသောအမှုပြုပြီ။
တွေးတောကြည့်။ သခင့်ခြေလက်မှ အသွေးစမ်းချောင်းပမာ စီးဆင်း
အသွေးယိုဖိတ် အပြစ်ထမ်းရွက် ကြီးမားမေတ္တာအံ့ဖွယ်ရှင်
နှလုံးကြေကွဲ၊ စူးရှဝေဒနာပြင်းစွာ ခံစားသင်ဖို့ပင်
မုသားစွပ်စွဲလျက် ရင်နှင့်ကာ နှလုံးကြေကွဲ
ခြေလက်သံမှိုစွဲ၊ ဖူးသရဖူးစောင်းလျက် မညဉ်းညူခဲ့
သစ္စာဖောက်ခံရ၊ လေးလံသောက ဝေဒနာခံစားလည်း
အပြစ်ဝန်ထုပ် မိမိကိုယ်ပေါ်တင်ကာ သင့်ဖို့အသေခံရ
အပြစ်အဖိုးအခ၊ နှိပ်စက်ခြင်းဝေဒနာ သူခံရ၏
ဖြောင့်မတ်ဝတ်လုံဖြင့် လွှမ်းခြုံပြီ၊ ဘုရားသားဖြစ်စေပြီ။
(ဝီလျှံဟိလေးဘာတောပ် ၁၇၉၆-၁၈၇၇ သီဆိုသော “အပြစ်အားလုံး
ထမ်းရွက်စေပြီ” အံ့ဖွယ်မေတ္တာ သံစဉ်ဖြင့် သီဆိုကျူးဧသည်)။
ဒေသနာမတိုင်ခင် ဒေါက်တာ ဂရိတ်တန်.အယ်လ်.ချန်မှ ရှင်မဿဲ ၂၆း၄၇-၅၆ ကို ဖတ်ကြားသည်။
ဒေသနာမတိုင်ခင် မစ္စတာ ဘင်ဂျမိန် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ ဂုဏ်တော်ကျူးဧသည် (ဘန် အိပ်ခ်ျ ဖရိုက် ၁၉၁၄ သီကုံးသော “တစ်ကိုယ်တော်အထီးကျန်”)
သူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို စွန့်၍ပြေးကြ၏
“ထိုအကြောင်းအရာကား အနာဂတ္တိကျမ်း ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်းဟု လူအစုအဝေးတို့ကို မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကို စွန့်ပစ်၍ ပြေးကြ၏။ (ရှင်မဿဲ ၂၆း၅၆)
(ရှင်မဿဲ ၂၆း၄၆္ထç ၄၇ç ၄၈ç ၅၁း၊ ရှင်ယောဟန် ၁၈း၁၀၊
ရှင်မဿဲ ၂၆း၅၃-၅၄ç ၅၅။)
၁။	ပထမ ကိုယ်တော်အား စွန့်ပစ်၍ပြေးကြခြင်းသည် ပရောဖက်များ ကြိုတင်ဟောကြားသော ကျမ်းစာပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။ ဇာခရိ ၁၃း၆-၇၊ ရှင်မဿဲ ၂၆း၃၁၊ ရှာမာကု ၁၄း၂၇
၂။	ဒုတိယ ကိုယ်တော်အား စွန့်ပစ်၍ပြေးကြခြင်းသည် အပြစ်ထဲ၌ ပြိုလဲသော မျိုးနွယ်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်၏။ ရောမဩဝါဒစာ ၅း၁၂ ဧဖက်ဩဝါဒစာ ၂း၅ç၃၊ ရောမဩဝါဒစာ ၈း၇၊ ၂ ကော ၄း၃၊
၃။	တတိယ၊ ကိုယ်တော်အား စွန့်ပစ်၍ပြေးကြခြင်းသည် ဤအရာကို ဦးစားပေးပြီး ဧဝံဂေလိ (မူလအဓိပ္ပာယ်အတိုင်း ဧဝံဂေလိ) သတင်းကောင်းကို မသိနားမလည်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရှင်မဿဲ ၂၆း၃၅၊ ရှင်ယောဟန် ၁၆း၃၀-၃၂၊ ရှင်လုကာ ၂၂း၆၂ ယေရမိ ၁၇း၉၊ ရောမ ၇း၂၄